होसियार रहनुस तपाईको यी १० गल्तिहरुको कारणले गर्दा झर्ने गर्दछ कपाल – Krazy NepaL
होसियार रहनुस तपाईको यी १० गल्तिहरुको कारणले गर्दा झर्ने गर्दछ कपाल
November 5, 2020 480
काठमाडौँ । यदि तपाइँको टाउकोको कपाल सदै झर्ने कारणले चिन्तित रहनु भयको त हुनुभयन ?
हुनतः कपाल झर्नु एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो तर, अस्वभाविक रुपले कपाल र्झछ भने त्यो ठुलो चिन्ताको विषय पनि हो । तर एकाएक कपाल झर्ने समस्या के कारणले हुन्छ त्यो भने जानिराख्नु पर्छ । कपाल झर्नेको थुप्रै कारण मध्ये मुख्य १० कारण यस्ता छन्
१. रोग तथा तनाव
शल्यक्रिया भएपछि, दुर्घटना वा गम्भीर बिरामी परेपछि मानिसको कपाल झर्न थाल्दछ । साथै यदि मानिस अत्यधिक तनावमा छ भने उसको कपाल झर्ने क्रम तिव्र हुन्छ । तर तनावका कारण झर्न थालेको कपाल कालन्तरसम्म झर्ने गर्दछ ।
२. गर्भ रहेको बेला
कतिपय महिलामा गर्भधारणको समयमा पनि कपाल झर्ने गर्दछ । यो अवस्थामा कपाल झर्नु सामान्य हो । तथापी यस्तो अवस्थामा कपाल झरेपनि पछि कपाल पूनः पलाउन थाल्दछ ।
३. औषधि वा भिटामिन सेवन
यदि कोहि मानिस अत्यधिक मात्रामा औषधि वा भिटामिनको सेवन गर्छ भने उसको समेत कपाल झर्ने गर्दछ । यस्तोमा भिटामिनको प्रयोग कम गरेसंगै कपाल झर्ने क्रम रोकिन्छ ।
४. कम प्रोटिन
यदि शरीरमा आवश्यकता अनुसारको प्रोटिन पुगेन भने पनि कपाल झर्न थाल्छ । प्रोटिनको कमी भएको २र३ महिनाबाटै कपाल झर्ने समस्या शुरु हुन्छ । तर शरीरमा प्रोटिनको मात्रा पुग्यो भने कपाल झर्ने क्रम रोकिन्छ ।
आजकल धेरै मानिसमा कपाल झर्ने समस्या हर्मोनका कारणले हुने गर्दछ । यसमा जिन र पुरुष हर्मोनले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ । यसरी झर्ने कपाललाई पूनः पलाओस् भन्न मल्हम वा कपाल रोपेर पनि पहिले झै बनाउन सकिन्छ । कतिपयमा भने यसले सुधार नगर्न सक्छ ।
कतिपय पुरुषमा तालु खुईलने समस्या सामान्य झै भएको छ । निश्चित उमेर पुगेपछि कपाल झर्नु वंशाणुगत कारणले हुने गर्दछ । परीवारमा बुवाआमा वा अन्य कोहिको कपाल झर्ने समस्या छ भने त्यो समस्या परीवारका सदस्यलाई हुनसक्छ ।
कतिपय मानिसमा हुने मानसिक तनावका कारणले पनि कपाल झर्ने समस्या हुनसक्छ । मानसिक रुपमा हुने तनावले मानिसलाई हर समय चिन्तामा राख्ने भएकाले सकेसम्म यसको निदान गर्नु पहिलो उपचार हुन्छ ।
८. आइरनको कमी
आजकल केहि न्युन मानिसको शरीरमा आइरनको कमी रहने गर्दछ । जसका कारण कपाल झर्ने सम्भावना रहन्छ । आइरनको कमीले कपाल झर्ने समस्याका अतिरिक्त बेहोस हुने, टाउको दुख्ने, आँखा धमिलो हुने लगायतका समस्याहरु देखा पर्न सक्छ ।
९. भिटामिन बीको कमी
भिटामिन बीको कमीले पनि कपाल झर्ने समस्या हुन्छ । यसको समाधानका लागि भिटामिन बी पाइने खाद्य पदार्थहरु फलफुल, माछा, मासु, तरकारी प्रशस्त मात्रा खानु उत्तम हुन्छ ।
१०. अनावश्यक क्रिम र स्ट्रेट
कपाल झर्ने अर्को मुख्य कारण भनेको कपाल सुन्दर बनाउने नाममा गरीने अनावश्वयक क्रिमको प्रयोग तथा कपालमा गरीने रंगको प्रयोग पनि हो । साथै पटक पटक गरीने हेयर स्ट्रेटले पनि कपाल झर्ने समस्या हुने गर्दछ ।
Prevसंसारकै लाजमर्दो छाडा २० बिबाहहरु (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
Nextखुसिको खबर : रुसले बनायो कोरोनाको औसधि पहिलो खोपको लागि करोडौ डोजको प्रि अडर
आज भाद्र २० गते आइतवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल
“यो पाँच सपना झु’क्किएर नि कसैलाई नभ’न्नुहोला के के हुन् त जानीराखौ “